WordPress को लागी उत्तम सामाजिक साझेदारी बटन प्लगइन Martech Zone
सोमबार, अक्टोबर 13, 2014 Douglas Karr
केही हप्ता अघि, मेरो फेसबुक नेटवर्कमा कसैले सोध्यो कि कुन उत्तम सामाजिक साझेदारी बटन प्लगइनहरू WordPress का लागि त्यहाँ छन्। मलाई यसको सरलता मन पर्थ्यो JetPack को सार्वजनिक गर्नुहोस् र तथ्य यो छ कि यो Automattic प्रोग्रामरहरू द्वारा विकसित गरिएको थियो (WordPress का विकासकर्ताहरू); जे होस्, या त मेरो होस्ट सेटिंग्स वा केहि प्लगइनले साझेदारी पपअप बेकार रेन्डर गर्यो (धन्यबाद माइकल Stelzner त्यो औंल्याउनको लागि!)। म सामाजिक नेटवर्कमा सामग्री पुश गर्नको लागि अझै प्लगइन प्रयोग गर्दैछु, तर म साइटमा साझेदारी बटन प्रयोग गरिरहेको छैन।
हामी पनि यसको प्रयोग गर्थ्यौं फ्लेयर प्लगइन जुन एकदम आश्चर्यजनक थियो। यद्यपि कम्पनीले प्लगइनलाई परित्याग गर्यो र अब उनीहरूको सामाजिक साझेदारी बटनहरू सदस्यताको रूपमा बेच्दै छ। सेवाले राम्रोसँग काम गरेन र म अधिक र अधिक मुद्दाहरूमा भागिरहन्छु त्यसैले मैले यसलाई र प्लगइनलाई त्यागें। धेरै खराब सुविधाहरूमध्ये एउटा यो हो कि म कुनै पनि पोष्टको लागि कुल शेयर प्राप्त गर्न सक्थें र मैले अरु कोड पढ्नको लागि टेम्प्लेटमा कहीं पोस्ट गर्न केही कोड विकास गरें।
त्यसोभए, शिकार एक उत्कृष्ट वर्डप्रेस प्लगइनको लागि थियो जुन एक राम्रो अनुकूलनयोग्य बटन बार र विकल्पहरूको एक धेरै प्रदान गर्दछ। मैले दर्जनौं प्लगइनहरू र उत्पादनहरूको पठन र परीक्षण गरें र यो कलको खरीदमा अन्त भयो WordPress को लागी सजिलो सामाजिक शेयर बटनहरु.
प्लगइन छैन सबै भन्दा राम्रो सेटअप गर्न र अनुकूलन गर्न, तर आन्तरिक विजार्ड सरल छ र उन्नत विकल्प प्रशस्त छन्, सामाजिक अनुसरण विजेटहरू र केही सेयर एनालिटिक्स सहित।
मैले यस पोष्टमा हाम्रो सम्बद्ध लिंक समावेश गरेको छु - डाउनलोड गर्नुहोस् WordPress को लागी सजिलो सामाजिक शेयर बटनहरु र तपाइँको पाठक तपाइँ लाई बढावा दिनुहोस्!
टैग: फेसबुक बटनगुगल + बटनसामाजिक बटनसामाजिक बटन WordPress प्लगइनसामाजिक बटनसामाजिक साझेदारी बटनहरू सजिलो सामाजिक साझेदारी बटनहरू उत्तम सामाजिक साझेदारी बटनहरूसामाजिक शेयर मेट्रिक्ससामाजिक शेयर WordPress प्लगइनट्विटर बटनWordPress प्लगइन
Yesmail खेल र मौसम को लागी बाह्य ईमेल ट्रिगर जोड्दछ